Ogaden News Agency (ONA) – Roobabkii Guga oo Qaybo Kamid Ah Ogadenia Dhibaatooyin Kagaystay.
Roobabkii Guga oo Qaybo Kamid Ah Ogadenia Dhibaatooyin Kagaystay.
Posted by Dulmane	/ May 7, 2017
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia ayaa sheegaya dhibaatooyin ay roobabkii gugu ugaysteen dadka iyo duunyada kudhaqan wadanka Ogadenia.
Dadka ree Ogadenia oo mudo aad udheer kujiray abaaro aan horay iyagoo kale loo arag ayaa helay raxmada Alle oo sifiican ay ugu qaboobeen waxaana lasheegayaa in roobab waawayn ay ka da’een guud ahaan wadanka Ogadenia.
Hase yeeshee roobabka ayaa lasheegayaa in ay dileen dad iyo duunyo badan oo kudhaqnaa wadanka Ogadenia waxaana dadka iyo duunyada ay roobabku waxyeeleeyeen naloogu sheegay sidan.
Warkan ayaa sheegaya in markay taariikhdu ahayd 2/5/17 Dagmada Sagag ee Gobolka Nogob waxay roobabku kudileen gabadh lagu magacaabi jiray Faadumo Cabdi. Sidoo kale 3/5/17 Toonceelay oo Qabridahare katirsan waxay roobabku kudileen 2 wiil oo dhalinyaro ah.
Warku wuxuu intaas raacinayaa in 3/5/17 Labadare oo Dagmada Xamaro katirsan waxay biyuhu dileen 15 lo’o ah oo uu lahaa nin lagu magacaabo Cadaani. Waxaa kale oo markay taariikhdu ahayd 3/5/17 Gabagabo oo Qabridahare katirsan waxay roobabku kudileen 50 adhi ah oo uu lahaa nin lagu magacaabo Maxamad Deeq Xuseen iyo 60 adhi ah oo uu lahaa ninka lagu magacaabo Xaafid.
Sidoo kale meelo kala duwan oo Ogadenia kamid ah ayaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin kadhashay roobabkii guga ee guud ahaan wadanka dhawaan ka curtay.